प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको के हो | गठन र अध्ययन
प्रारम्भिक बाल शिक्षा के हो
मारिया जोस रोल्डन | 19/11/2021 12:44 | प्रशिक्षण
सबैजना लायक छैनन् जब यो सिकाउने कुरा आउँछ र के शिक्षा र अध्यापन केही व्यावसायिक हुनुपर्छ, जसले यो प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई धेरै सन्तुष्ट पार्छ। प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाको उद्देश्य ० देखि ६ वर्षसम्मका केटाकेटीहरूलाई शिक्षा दिनुबाहेक अरू केही होइन। सत्य यो हो कि सानाहरूलाई सिकाउन बालुवाको सानो दाना योगदान गर्न सक्षम हुनु एकदमै सन्तोषजनक छ।
निम्न लेखमा हामी तपाईंसँग थप विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौं प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा समावेश गर्ने सबै कुराको र किन यो अध्ययन र अभ्यास गर्न लायक छ।
1 प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको के हो?
2 प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ
3 एक राम्रो प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षक को गुण
4 प्रारम्भिक बाल शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरू के के प्रस्ताव गर्दछ?
प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको के हो?
प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षा प्रणाली भित्र पहिलो चरण हो। यो पछि प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा छ। प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षाले ० देखि ६ वर्षसम्मका बालबालिकाको शिक्षालाई समेट्छ र यसमा तीन प्रकारका राम्रा फरक क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्: स्वायत्तता, वातावरणको ज्ञान र इष्टतम भाषा विकास।
प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई दुई चक्रमा विभाजन गरिनेछ: पहिलो नर्सरीहरूमा सिकाइन्छ र3वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरिन्छ। दोस्रो चक्र विद्यालयमा सिकाइन्छ र3देखि6वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरिएको छ।
शिक्षकको काम भनेको सरसफाइ वा खाना खाने बेलामा बालबालिकाहरू स्वायत्त हुन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुबाहेक अरू केही होइन। यस बाहेक, पेशेवरले भाषा वा साइकोमोटर सीपहरू जस्ता केही प्रकारको शिक्षालाई असर गर्छ। बालशिक्षकको रूपमा काम गर्न, प्रारम्भिक बाल शिक्षासँग सम्बन्धित डिग्री पास गर्न आवश्यक छ बालबालिकाको शिक्षा र शिक्षामा पर्याप्त तालिम प्राप्त गरेको छ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ
यस प्रकारको पेशालाई राम्रोसँग रमाइलो गर्न र अभ्यास गर्नको लागि पेशा हुनु आवश्यक छ। यो साना बच्चाहरु को लागी जोश र भक्ति महसुस गर्नेहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय डिग्री हो। चीजहरू सिक्न उत्सुक साना केटाकेटीहरूलाई सिकाउन र सिकाउन सक्षम हुनुभन्दा जीवनमा केही चीजहरू बढी इनामदायी हुन्छन्।
यो सत्य हो कि सबैजना यसको लायक छैनन् किनकि बच्चाहरु संग व्यवहार एक सजिलो वा सरल कार्य होइन। पेशेवर धेरै धैर्य हुनुपर्छ र नाजुक क्षणहरूमा कसरी शान्त हुने भनेर जान्नुपर्छ। तर, केटाकेटीले कसरी सिकिरहेका छन् र सिकाइमा विकसित हुँदैछन् भन्ने देखेर, उसले यस पेशाको सबैभन्दा जटिल र कठिन पक्षहरू कभर गर्न पाउँछ।
प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षकले पहिलो व्यक्तिमा बच्चाहरूले कसरी केहि चीजहरू आफैं गर्न सक्षम हुन्छन् र कसरी उनीहरूले अन्य मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दा महत्त्वपूर्ण भाषाको विकास गर्न थाल्छन् भनी अवलोकन गर्छन्। यो पर्याप्त थिएन जस्तो शिक्षकको जागिरमा धेरै राम्रो जागिरको अवसर छ र बजारमा प्रवेश गर्न सजिलो छ।
एक राम्रो प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षक को गुण
त्यहाँ धेरै गुणहरू छन् जुन बाल शिक्षकको रूपमा अभ्यास गर्दा अनुमानित हुन्छन्। मुख्य एक निस्सन्देह जुनून र बच्चाहरु को लागी उत्साह छ।
दोस्रो गुण भनेको धैर्य र आत्मसंयम हुनेछ। बच्चाहरूसँग मिल्न सजिलो छैन र राम्रो शिक्षक सानाहरूलाई बुझ्न र बुझ्न पर्याप्त शान्त हुनुपर्छ।
शिक्षक पनि एक संगठनात्मक व्यक्ति हुनुपर्दछ जसले 20 देखि 25 बच्चाहरूको कक्षाकोठा कसरी नेतृत्व गर्ने भनेर जान्दछन्। कक्षा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, प्रत्येक बच्चाको विशिष्ट अनुगमन गर्ने वा वयस्कको रूपमा विकासको लागि महत्वपूर्ण मानहरूको श्रृंखला कसरी प्रसारण गर्ने भनेर जान्न।
प्रारम्भिक बाल शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरू के के प्रस्ताव गर्दछ?
प्रारम्भिक बाल शिक्षाको स्नातक भएर त्यहाँ धेरै रोजगारीका अवसरहरू छन्। सार्वजनिक वा निजी किन्डरगार्टन वा विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको शिक्षक हुनु सामान्य कुरा हो। अन्य सम्भावित आउटलेटहरू शैक्षिक अनुसन्धान वा प्रसिद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यसँग सम्बन्धित छन्।
विद्यालय वा शैक्षिक केन्द्रहरूमा काम गर्नु बाहेक, शिशु शिक्षकले अस्पताल वा नाबालिगहरूका लागि केन्द्रहरू जस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा विकास गर्न सक्छ। प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षकले पनि आफ्नै व्यवसाय खोल्नेछ र निजी एकेडेमीहरूमा काम गर्नेछ, बच्चाहरूलाई स्कूल बाहिर पढ्न मद्दत गर्दै। तपाईंले देख्न सक्नुहुने रूपमा, प्रारम्भिक बचपन शिक्षामा स्नातक भएर प्रस्तावित धेरै रोजगारी विकल्पहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » प्रारम्भिक बाल शिक्षा के हो
स्थायी शिक्षा केन्द्र भनेको के हो ?
कुन कामलाई आवश्यक मानिन्छ?